ဘုန်းကြီး တရား ဟောနေစဉ် တရား နာရောက်လာသည့် စပါးကြီးမြွေ…! – Tameelay
ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဆရပူရီခရိုင် ဆရပူရီမြို့ မယ့်ထမ့်ခေါင်ကျောက်ကျောင်းတိုက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ မနက်စောစောက တရား ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ကြစဉ် စပါးကြီးမြွေတကောင် ရောက်လာပြီး တရားနာသွားခဲ့ပါတယ်။
တရားအဲဒီမနက်က ကျောင်းဝင်းထဲမှာ သံဃာတော်တွေ ထိုင်ပြီး ပရိတ်တရားရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ကြစဉ် အရှည် ၃မီတာလောက်ရှည်တဲ့ စပါးကြီးမြွေတကောင် ရောက်လာပြီး ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းနေလို့ ဖရဆ မွတ်ဝီရချွန်း အမည်ရ သံဃာတော်တပါးက ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး “ဒီမနက်မှာ လောကရဲ့ ဘက်ေ တ်ာသား တကောင်အလည်လာသွားတယ်၊ မေတ္တာသုတ်ဟာ တကယ်ဘဲအရးကြီးလှတယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ဖေ့စ်တ်စာမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်ရာမှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအွန်းလိုင်းပ်ါမှာရေပန်းစားတဲ့ သတင်းတပုဒ် ဖြစ်နေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံ အီဆန်ဒေသမှာ နားခီးလို့ခေါ်တဲ့ နဂါးမင်းသမီး အခုထိရှိကြောင်း ဒေသခံရွာသားတွေ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြပြီး အဲဒီမြွေဟာ နားခီးက လူ့လောကထဲ ပြန်ဝင်လာချင်လို့ ကိုယ်ထင်ပြတာလို့ လည်း ကွန်မင့်တွေပေးနေကြပါတယ်။
ဘုနျးကွီး တရား ဟောနစေဉျ တရား နာရောကျလာသညျ့ စပါးကွီးမွှေ…!
ထိုငျးနိုငျငံ အလယျပိုငျး ဆရပူရီခရိုငျ ဆရပူရီမွို့ မယျ့ထမျ့ခေါငျကြောကျကြောငျးတိုကျမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဒီဇငျဘာလ ၂၂ ရကျနေ့ မနကျစောစောက တရား ရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျကွစဉျ စပါးကွီးမွှတေကောငျ ရောကျလာပွီး တရားနာသှားခဲ့ပါတယျ။
တရားအဲဒီမနကျက ကြောငျးဝငျးထဲမှာ သံဃာတျောတှေ ထိုငျပွီး ပရိတျတရားရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျကွစဉျ အရှညျ ၃မီတာလောကျရှညျတဲ့ စပါးကွီးမွှတေကောငျ ရောကျလာပွီး ငွိမျသကျစှာလဲလြောငျးနလေို့ ဖရဆ မှတျဝီရခြှနျး အမညျရ သံဃာတျောတပါးက ဓာတျပုံရိုကျယူပွီး “ဒီမနကျမှာ လောကရဲ့ ဘကျေ တျာသား တကောငျအလညျလာသှားတယျ၊ မတ်ေတာသုတျဟာ တကယျဘဲအရးကွီးလှတယျ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ဖစျေ့တျစာမကျြနှာပျေါတငျလိုကျရာမှာ ဒီရကျပိုငျးအတှငျးအှနျးလိုငျးပျါမှာရပေနျးစားတဲ့ သတငျးတပုဒျ ဖွဈနတောပါ။ထိုငျးနိုငျငံ အီဆနျဒသေမှာ နားခီးလို့ချေါတဲ့ နဂါးမငျးသမီး အခုထိရှိကွောငျး ဒသေခံရှာသားတှေ သကျဝငျယုံကွညျကွပွီး အဲဒီမွှဟော နားခီးက လူ့လောကထဲ ပွနျဝငျလာခငျြလို့ ကိုယျထငျပွတာလို့ လညျး ကှနျမငျ့တှပေေးနကွေပါတယျ။
လူသားများ မဖူးရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူ
လူသားများ မဖူးရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူ လူသားမဖူး စေတီထူး လူသားများ မဖူးရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယ်… (၁) စူဠာမဏိစေတီတော်၊ (၂) ဒုဿစေတီတော်၊ (၃) မဟေသရစေတီတော် တို့ဖြစ်ကြတယ်။ (၁) စူဠာမဏိစေတီတော်ဆိုတာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ သိကြားမင်းတည်ထားတဲ့ စေတီဖြစ်တယ်။ …
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးဆန်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(မပုပ်မသိုးသော ဆရာတော်များ)
မပုပ်မသိုးသော ဆရာတော်များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထူးဆန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များစွာပေါ်ထွက်လျှက်ရှိရာ ထိုပဂ္ဂိုလ်များစွာအနက်မှ ပျံလွန်တော်မူသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော်လည်း ရုပ်ကလပ်တော်မှာ မပုပ်မပွ ၊မပုပ်မသိုးဘဲ တည်ရှိနေသော ဆရာတော်များကို ဆိုလိုပါသည်။ ဆရာတော် ဦးကဝိ(စွန်းလွန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး) ဆရာတော် ဦးကဝိ (စွန်းလွန်းဆရာတော်) ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် သက္ကရာဇ် ၁၂၃၉ ခုနှစ်၊ တစ်ပေါင်းလဆန်း …